कोरोना कहरलाई वेवास्ता गर्दै म्याराथन – कमल खबर
गृह/खेलकुद/कोरोना कहरलाई वेवास्ता गर्दै म्याराथन
फिक्कल । शनिबार विहान लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा सूर्योदय नगरपालिकाको पर्यटकिय गन्तव्य कन्याममा म्याराथनको लागि सयौको संख्यामा मानिसहरु भेला भएका थिए । म्याराथनको सुरु गनुपुर्व तयारीको लागि १० मिनेट जति समय लाग्दा झापाबाट आएका गाडीहरु र झापा तर्फ जाने गाडीको ताँती कन्याममा थियो । गाडीहरुको हुलमा एम्बुलेन्स समेत थियो । कोही बिरामी उपचारको लागि लग्दै थिए त कोही उपचार गराएर घर लिएर आउँदै । जस्तै सुकै अवस्था भएपनि अत्यावश्यक सवारीसाधन संचालनमा अवरोध हुनुहुँदैन् । त्यही हुलमा आमाको उपचारमा आर्थिक अभाव भएपछि पैसा लिन मोटरसाइकल चढेर आएका एक जनालाई रोकेर ट्राफिक प्रहरीले जान नमिल्ने बतायो । उनले आफनो समस्या बताए पनि ‘नियम भनेको नियम हो तपाईले पनि मान्नुपर्छ’ भन्दै ट्राफिकबाट धम्कीपुर्ण कुरा आएपछि ति व्यक्ति म्याराथन सुरु नहुन्जेल रोकिए । म्याराथन सुरु भएपछि एकै पटक ह्रवारह्रवारती सवारीसाधन चल्दा दुर्घटनाको जोखिम देखिन्थ्यो । राजमार्ग क्षेत्रमा म्याराथन दौडिएका धावकहरुलाई सवारीसाधनबाट तर्किर दौडन निक्कै समस्या बन्यो । कन्यामबाट फिक्कलसम्म करिब ४ किलोमिटर दौडको लागि तय गरिएको थियो । कोरोनाको कहरको बिचमा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी आधारभुत कुराहरु पुरा समेत नगरि सयौको संख्यामा भेला गराउनुले सूर्योदयमा कोरोनाको जोखिम नरहेको जस्तो देखिन्थ्यो ।
राजमार्ग म्याराथन प्रतियोगिता आयोजना गर्न नहुने भन्ने होइन तर आयोजकले यातायात आवागमनको बैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । गत मंसिरमा भएको तेह्रौ दक्षिण एसियाली खेलकुद ( साग) समेत काठमाण्डौको सडकमा नै दौड आयोजना गरिएको थियो । दशरथ रङ्गशालाबाट शुरु भई टेकु, कालिमाटी, कलङ्की, बल्खु, सातदोबाटो, कोटेश्वर गठ्ठाघर, सल्लाघारी, सूर्यविनायक हुँदै पुनःफर्किएर सल्लाघारीबाट कोटेश्वर हुँदै नयाँबानेश्वर, माइतीघर, सिंहदरबार भद्रकाली वीरअस्पताल, जमल, लैनचौर, दरबारमार्ग, उत्तरढोका, नागपोखरी, दक्षिणढोका, घण्टाघर, भद्रकाली हुँदै दशरथ रङ्गशालामा पुगेर समापन भएको खेल आयोजनाको बारेमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले प्रतियोगिता भन्दा एक दिन अगावै अत्यावश्यक सवारी बाहेक अन्य नचलाउन अनुरोध गरेको थियो ।
पतन्जलि योग समिती प्रदेश नम्वर १ को आयोजना प्रदेश स्तरिय अनलाईन योग शिविर सुर
कमल गाउँपालिकाको सातौ गाउँसभावाट पारित आ. व. २०७७ र ०७८ को निति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका एक कार्यक्रम विच सार्वजनिक